Mersin ဆိပ်ကမ်းမှတ်တမ်းများဇောက်ထိုးပါ! | RayHaber
[16 / 12 / 2019] Seçer'den 1 Lira ရှိသောလူငယ်များအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေ	33 Mersin
[16 / 12 / 2019] Kaynarca Tuzla Pendik Metro အတွက်သိသာထင်ရှားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[16 / 12 / 2019] Kocaeli ရှိလုံခြုံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရထားလမ်းနှစ်ခုသို့ကူးပါ	41 Kocaeli
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး33 MersinMersin ဆိပ်ကမ်းအောက်ထိပ်တန်းမှတ်တမ်းကိုသင်!
26 / 08 / 2019 33 Mersin, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
Mersin မှတ်တမ်းများဆိပ်ကမ်း Sub-အထက်ပိုင်းများမှာ
Mersin ဆိပ်ကမ်းအော်ပရေတာ MIP နာရီ 178 လှုပ်ရှားမှုကဆောင်ရွက်မှတ်တမ်းအသစ်တစ်ခုကွန်တိန်နာသင်္ဘောစစ်ဆင်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ 2018 ခုနှစ်တွင်ကွန်တိန်နာကုမ္ပဏီများမှ MIP doymuyor စံချိန်နှင့်အတူ Mersin ဆိပ်ကမ်းများတွင်အခြေချနေထိုင်အရောင်းအများ၏ volume ထဲမှာပထမဦးဆုံးအော်ပရေတာအဖြစ်, ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုလက်မှတ်ထိုးသည်။
သင်္ဘောစစ်ဆင်ရေးနှင့် 178 မှတ်တမ်းအသစ်တစ်ခုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိအသင်းအားဖြင့်တစ်နာရီလျှင်ကွန်တိန်နာလှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူ Mersin အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (MIP) Inc က။ အများပြည်သူနှင့်အတူ၎င်း၏အောင်မြင်မှု share ကြောင့်လူမှုမီဒီယာကုမ္ပဏီနီးပါးရေနံနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Ramada စက္ကန့်ဖြတ်ကိုင်တွယ်တွင် CONTAINER!
TCDD TCDD ဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူယခုနှစ် 11 '' TOR ကို '' နည်းလမ်းအဘို့အ 2007 မေလ 36 အပေါ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့် operated ခံရစဉ်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိက 12 ကုန်တင်ကိုင်တွယ်တန်ဖိုး 12 နှစ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် MIP-run Mersin ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုနှစ်ပတ်လည်ကာလဖြစ်ပါတယ်အတွက် 85 ကွန်တိန်နာလှုပ်ရှားမှုတန်ဖိုးများဒါ ဒါဟာ 107 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ယခုနှစ်မြင့်တက်လောကျသာအဆိပ်ကမ်း,6လအတွင်းအဖြစ် xnumx'inc အတွက်ယေဘုယျ, 2019 အတွက်xnumx'ıncသမ္မတရွေးကောက်ပွဲဆိပ်ကမ်းများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်တူရကီနှင့်အတူကိုင်တွယ်ကုန်တင်ပမာဏကိုနေစဉ်ကိုင်တွယ်ကွန်တိန်နာပမာဏ; ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်xnumx'lükရာခိုင်နှုန်းကိုတိုးသူ55 တထောင် TEU ဆွဲထုတ်။
ယင်းကဆိုသည်တိုးကိုထမ်းရွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြန်ဆန်ကြီးထွားလာအသွားအလာဝန်၏အလှူငွေဖြစ်ခဲ့သည်။ တူရကီအတွက် Mersin ဆိပ်ကမ်းကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်း 2018 ကိုင်တွယ်ကွန်တိန်နာပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဇန်နဝါရီမှမေအတွက်2တစ်နှစ်။ ထိုအရပျ၌အကတစ်နှစ် 2019 အတွက်စောင့်မတော်မူ၏။ (အဆိုပါ Mersinhaberc)
ထုတ်လုပ်မှုမှတ်တမ်းများနှင့်အတူယခုနှစ် Kardemir ရဲ့ပထမသုံးလပတ် ...
Optifuel စိန်ခေါ်မှုနောက်တဖန် 2019 ထိုးမြဲလက်မှတ်နှင့်အတူစံချိန်တင်ကျဆင်းသွား
Bursa သည် UR-GE စီမံကိန်းများနှင့်အတူပို့ကုန်မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖောက်သည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Kayseri-Sivas လိုင်းခုံတွင်မှလမ်း ...
Bozüyükရှိ TCDD မြေအောက်နှင့် Overpass ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ…
သံ: "ပု YHT အောက်ပိုင်း၏ Start ကိုနှင့်အထက်ဂိတ်ကစားခြင်း"
ထောက်ပံ့ရေး Pass ကို 19 အောက်ပိုင်းနှင့်အထက်ပိုင်း Ettik ဝယ်လိုအား
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - အဆင့်ဖြတ်ကျော်သွယ်တန်းမှုအောက်သို့မလွှဲသာ…
TCDD Mersin ဆိပ်ကမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းဆုံလိုင်းလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်
Mersin ဆိပ်ကမ်းတွင်အကြီးမားဆုံးရှယ်ယာလွှဲပြောင်းမှု! ရာခိုင်နှုန်း 40 …
Mersin ၏တူရကီရဲ့မြေထဲပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း Gateway မှာ
အကျပ်အတည်းအတွက် Mersin ဆိပ်ကမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု!
Mersin ဆိပ်ကမ်းအော်ပရေတာ MIP
Seçer'den 1 Lira ရှိသောလူငယ်များအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေ
Kaynarca Tuzla Pendik Metro အတွက်သိသာထင်ရှားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်မသန်စွမ်းသူများနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံထားရသောအလုပ်သမားများကိုစုဆောင်းရန်
Anadolu Isuzu သည်၎င်း၏ပထမဆုံးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Vitesco Technologies သည် Plug-In Hybrid Powertrain အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချသည်